Uzovela enkantolo osolwa ngokugwaza iphoyisa | News24
Uzovela enkantolo osolwa ngokugwaza iphoyisa
Johannesburg - Indoda esolwa ngokugwaza iphoyisa lakwamasipala ilindeleke ukuba ivele ngaphambi kweNkantolo yeMantshi yaseGoli ngoMsombuluko.
Okhulumela amaphoyisa akwamasipala waseGoli uWyne Minnaar uthe: "Le ndoda iboshwe ngeSonto ngemuva kwezinsolo zokugwaza iphoysa engalweni ngesikhathi iboshelwa ukweba iselula."
UMinnaar uphinde wathi le ndoda iboshwe emgwaqeni uKing George noNoord ngoLwesihlanu.
"Le ndoda yeba iselula kumuntu thizeni owayesesixukwini," kusho uMinnaar.
OLUNYE UDABA:Kugwazwe kwabulawa iphoyisa
Amaphoyisa ayesebnza ngaleso sikhathi ezwa umsindo ase ebona umsolwa ebaleka," kuqhuba uMinnaar.
"Omunye wamaphoyisa wamubamba umsolwa, wabe esikhipha ummese."
Iphoyisa laphuthunyiswa esibhedla iMilpark.
Umsolwa ugqunywe esitokisini samaphoyisa aseGoli, kubika abe-eNCA.